Udalula ubuhlungu adlule kubo umlingisi weScandal - Ilanga News
Home Izindaba Udalula ubuhlungu adlule kubo umlingisi weScandal
Useqale umkhankaso wokufundisa ngokhwantalala nangokuthikamezeka kwengqondo
UMLINGISI wodumo uphumela obala ngoku-hlukumezeka kwakhe okuholele ekuphaza-misekeni kwengqondo, waphathwa wukhwa-ntalala, waze wange-niswa esibhedlela sabagula ngengqo-ndo.
UNomvelo Makhaya (23) odlala indawo kaLindiwe emdla-lweni kamabona-kude owuchungechunge iSca-ndal, okhonji-swa phaka-thi nezi-nsuku kwi-e.tv, usephu-mele obala ngobu-hlungu nobunzima adlule kubo egconwa ngokuma kwekhanda lakhe ezi-nkundleni zokuxhumana.
Kuzo-khumbu-leka ukuthi lo mli-ngisi kwa-hlekiswa ka-khulu ngaye ngemuva kwe-sithombe esasabalala ezinku-ndleni zokuxhuma-na, abantu besho abakuthandayo ngokuma kwekhanda lakhe.
Ekhuluma neLANGA LangeSonto uNomvelo uthe sibe nzima kakhulu isikhathi adlule kusona njengoba egcine eseba nokhwantalala.
“Ngangivele ngazi ukuthi nginekhanda elikhulu njengoba nasesikoleni izingane zazihlekisa ngami.
“Ngangizitshela ukuthi uma sekwenzeka se-ngikhulile ngizokwazi
ukukwamukela kodwa akubanga njalo,
ngahlukumezeka kakhulu,” kusho le ntokazi engene emkhakheni wezoku-lingisa isencane.
Ngemuva koku-hlaselwa wukhwantalala, uthi ubesephila
ngamaphilisi ahlukene okuba-lwa kuwo nawokulala. “Amaphilisi yiwona abesebusa impilo yami ngoba bengingasakwazi kwe-nza lutho ngingawa-dlanga, okuyinto ecishe yaqeda nge-kusasa lami ekuli-ngiseni.
“Uma ngiphuze amaphilisi okulala bengiselwa ekuseni, ngigcine ngifike sekwedlule isikha-thi emsebenzini,” kusho
Uthe kuba-lulekile ukuthi uma uhlaselwe wukhwantalala uthole ukwesekwa okwanele emndenini njengoba naye ethi usizwe yikhona ukwesekwa wumnde-ni nabangani.
Wexwayise abantu ngokuthi uma umuntu ehambele esibhedlela sabathikamezeke engqondweni akusho ukuthi bayahlanya.
“Kubalulekile ukuthi abantu bafunde ngokhwa-ntalala nangokuthikamezeka kwengqondo,” kusho yena.
simo abhekane naso
uthi uthathe isinqumo
sokuxwayisa nokufundisa abantu ngokhwantalala nangothikamezeka kwengqondo.
Uhlela ukwenza imicimbi ezindaweni ezahlukene lapho ezokhuluma khona efundisa abantu.
obizwa ngokuthi Silent Crisis
ngoMgqibelo eBraamfontein, eGoli.
Unethemba lokuthi olandelayo uzowenzela eThekwini.
Previous articleIzitha zayizolo nobuhlobo obusha
Next articleUShenge ukhale ngamadoda kweye-IFPWB